मस्तिष्कको मृत्यु पश्चातपनि कलेजो दानगर्न सकिन्छः डा. प्रविण जोशी - Dainik Nepal
मस्तिष्कको मृत्यु पश्चातपनि कलेजो दानगर्न सकिन्छः डा. प्रविण जोशी
दैनिक नेपाल २०७३ पुष ४ गते १६:०३
(कलेजो प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर)
विभिन्न रोगहरुको उपचारको लागि विदेशीनु पर्ने र करोडौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा पछिल्लो समय नेपालमा पनि विभिन्न रोगहरुको उपचार सम्भव हुन थालेको छ । भर्खरै मात्र नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण गरी भारत लगायत अन्य मूलुकहरुमा गई करोडौं रकम खर्च गरेर कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपरिरहेको परिवेषमा अब कम खर्चमा आफ्नै देशमा उपचार पाइने भएपछि सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई खुसीको विषय बनेको छ । भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा केही दिन पहिला मात्र कलेजो प्रत्यारोपणमा सहभागि मध्येका एक डाक्टर हुन प्रविण जोशी । उनी मेहनत गरे जे पनि सम्भव हुन्छ भन्ने भनाइको पक्षमा छन् र त्यो प्रमाणित गरेर पनि देखाए । सन् २००३ मा युक्रेनबाट एमबीबीएस अध्ययन गरेका डा. जोशीले सन २००८ मा काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालबाट जनरल सर्जरी अध्ययन गरेको बताउँछन् । सन् २०१४ देखि एक बर्ष सम्म दक्षिण कोरियाको सोउलमा बसी कलेजो प्रत्यारोपण सम्बन्धि अध्ययन गरेका जोशीले एक बर्षदेखि भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा रही कलेजो प्रत्यारोपणको लागि निकै मेहनत गरे । भैरहवामा स्थायी बासस्थान भएका जोशीले भैरहवा मै शुलभ औषधी पसल संचालन समेत गरेका छन् । तर विशेष गरी आफ्नो अध्ययन अनुसार र लक्ष अनुसार उनले कलेजो प्रत्यारोपण नेपालमै गरेरै छाडने आंट र जोशका साथ भक्तपुरमा रहि काम गरेर आफुलाई सफल समेत तुल्याए । उनै जोशी संग भैरहवामा भेटघाटको क्रममा हामीले कलेजो प्रत्यारोपण नेपालमै कसरी सम्भव भयो ? आगामी दिनमा यसले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन ? लगायतका बिषयमा केही जान्ने कोशीस गरेका छौं । प्रस्तुत छ डा. जोशीसंग गरिएको कुराकानी:
प्रसंग सुरुगरौं, भर्खरै मात्र नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपण सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । यहाँपनि उक्त कार्यमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो, नेपालमा यो कसरी सम्भव भयो बताइदिनुहोस न ?
विशेष गरेर नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने भनी एक बर्ष पहिला म भक्तपुर स्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्दमा गएपछि त्यसको लागि आवस्यक प्रकृया हरु अँगाडी बढाएका हौं । पहिला त त्यसको लागि कानुन नै थिएन । हाल प्रत्यारोपण केन्द्रका डाइरेक्टर डा. पुकार चन्द्र श्रेष्ठले कानुन बनाउने काममा मूख्य भूमिका खेल्नु भयो । त्यसपछि हामीलाई काम गर्नकोलागि कानुन र प्रसासनले नछेक्ने भइसकेपछि म पनि कोरियामा बसेर यस विषयमा अध्ययन गरेका कारण चिनजानको आधारमा तत्काललाई कोरिया बाटै डाक्टरहरुको सहयोग लिएर काम गरि नेपालमा सफल रुपमा प्रत्यारोपण सम्भव भएको हो ।
ढिलै भएपनि यसरी नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण सफल त भयो तर हालसम्म किन सम्भव नभएको रहेछ भन्नेबारे यहाँले के विश्लेषण गर्नुभयो त ?
मूख्य त यससंग सम्बन्धित डाक्टरहरुको अभाव भएकाले हालसम्म असम्भव भएको हो । र यतातर्फ सोँच बनाइ लागिपर्ने व्यक्तिपनि कोही भएन । अर्कोकुरा यसलाई अन्य रोगको उपचारमा जस्तो थोरै डाक्टरले सम्भव नहुने हुँदा ठुलो टिमको आवस्यकता पर्दछ जुनकुरा हालसम्म सम्भव भएन र अझैपनि अभाव नै छ । र अर्को महत्वपूर्ण कुरा त यसलाई सफल पार्नको लागि डाक्टरले मात्रपनि नभई नेपाल सरकारको पनि ठुलो भूमिका हुने हुँदा हालसम्म यसले सफलता पाउन नसकेको मैले बुझेको छु । यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरी हामीले सफलता पूर्वक काम गर्न सकेका हौं ।
त्यसोभए अब निरन्तर रुपमा नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण हुन्छ त ? अब विदेशीको आवस्यकता पर्ला की नपर्ला ?
यसलाई भर्खरै आजकै मितिदेखि हामीले निरन्तर रुपमा काम गर्न सक्छौं भन्ने स्थिती अझैपनि छैन् । तत्काललाई हामीले विदेशी डाक्टरहरुको सहयोग लिनु पर्ने हुन्छ । मैले पहिलापनि भनिसकें अन्य रोगहरुको लागि जस्तो यसलाई थोरै डाक्टरहरुले सम्भव नहुने भएका कारण नेपालमा यस सम्बन्धि दक्ष डाक्टरहरुको अभाव कायमै छ । तसर्थ हाललाई बाहिरी सहयोगबाट हामी काम गर्छाैं । अलि ठुलो कामपनि भएका कारण हामीलेपनि आत्म विश्वास लिन अलि कठिन छ र यसको लागि कितावि ज्ञान मात्रलेपनि नहुने लगायतका कुराहरुले गर्दा तुरुन्तै बाहिरी सहयोग विना यो काम अझै सम्भव छैन् । तर अव करिब एक बर्ष सम्ममा हामीले ढुक्क भएर नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण लाई निरन्तरता दिन सक्छौं ।
नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण हुने भएपछि सम्पूर्ण नेपालीहरु निकै खुसीपनि भएका छन् । तर विदेशमा र नेपालमा प्रत्यारोपण गर्दा खर्चमा कस्तो फरक पर्ला त ?
पक्कैपनि एकातिर आफ्नै देशमा काम हुने भएपछि खुसी भएका नेपालीहरुलाई प्रत्यारोपणमा लाग्ने मूल्यले झन खुसी तुल्याउनेमा हामी विस्वस्त छौं । किनकी भारतकै कुरा गर्नेहो भने कलेजो प्रत्यारोपणको क्रममा अन्य कुनै समस्या उत्पन्न नभएमा कम्तिमापनि ६० लाख देखि ८० लाख सम्म खर्च हुन्छ भने हामीले १५ देखि बढीमा २५ लाख सम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष लिएका छौं । अझ यसको लागि नेपाल सरकारले पनि केही सहयोग गरेमा अझ कम हुने छ ।
सरकारको सहयोगको कुराहरु उठाउनुभयो । सरकारको तर्फबाट यहाँहरुले कस्तो सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
पक्कैपनि मूख्य कुरा त जुनसुकै काममा सरकारी सहयोग भएन भने काम गर्न सम्भव छैन् भन्नेकुरा सबैलाई थाहा नै छ । र कलेजो प्रत्यारोपणमा सरकारको सहयोगको बारेमा बोल्नु पर्दा सरकारले विशेष गरी कलेजो प्रत्यारोपणको बारेमा विभिन्न तालिमहरु दिने, बाहिरी मुलुकहरुमा तालिमकोलागि डाक्टरहरु पठाउने, आवस्यक श्रोत साधनको व्यवस्था मिलाइदिने, यसमा इच्छुक डाक्टरहरुलाई एकमुष्ठ गरेर उचित स्थानको व्यवस्था गरिदिने, पौसा तिर्न नसक्ने विरामीहरुलको लागि केही शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गरिदिने लगायतका कामहरु सरकारले गरिदिएमा हामीलाई काम गर्नको लागि र विरामीहरुलाई उपचार गराउनको लागि अझ सहयोग मिल्ने छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने मस्तीस्कको मृत्यु पश्चात अंग दान गर्ने जुन नियम छ त्यसलाई यतापनि लागु गरेर जनचेतना फैलाउनु पर्ने जरुरी रहेको छ । मस्तीस्कको मृत्यु पश्चात कलेजो दान गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामीले जिउँदो मानिसको सरिरबाट आधा कलेजो लिएर प्रत्यारोपण गछौं । तसर्थ लिएर अरु कसैलाई नयाँ जीवन दिन सकिन्छ भन्ने खालको जनचेतना फैलाउनको लागि सरकारी स्तरबाट नै पहल भयो भने अवस्यपनि मानिसहरुले कलेजो दान गर्छन र यसले सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई नै हित गर्ने छ ।
प्रसंग बदलौं, निकै ठुलो लगानी र उत्तिकै मेहनत गरि डाक्टरी लाईन अध्ययन गरेपनि नेपालमा यसले खासै स्थान पाउन नसक्दा योग्य डाक्टरहरु विदेशीँदा देशमा दक्ष डाक्टरहरुको अभाव भएको भन्ने भनाइमा यहाँ कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ?
सही भन्नुभयो । नेपालमा डाक्टरी लाईनमा मात्र नभएर जुनसुकै क्षेत्रमापनि काम गर्नेलाई सहज तरिकाबाट गरिखाने वातावरण अझै छैन् । र डाक्टरकै कुरा गर्नुपर्दापनि नेपालमा मेडिकल प्राक्टीस पछिल्लो समयमा केही मात्रामा हुने गरेतापनि अझै विकास भइसकेको अवस्था नभएकाले यहाँ दिक्क लाग्दो अवस्था छ । म आफैपनि २–३ बर्ष पहिला देशमा नबस्ने मोडमा थिएँ । पछि अटोमेटिक मन परिवर्तन गरी देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने अठोट लिएकाकारण यहाँ बसेको हुँ । तर यहाँले भनेजस्तो देशमा लगानी गरेपनि सोचे अनुरुप प्रतिफल पाउने सम्भावना कम नै छ ।
अन्त्यमा, के कुरामा ध्यान दिन सकेमा कलेजोमा समस्या आउँदैन होला बताइदिनुहोस न ?
विशेष गरी कलेजो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने मूख्य केही कारणहरु छन् । बढी मात्रामा मोटोपन भयो भने कलेजोमा बोसो जम्ने सम्भावना हुन्छ भने आवस्यक भन्दा बढी मदिरा सेवन गर्नालेपनि यस्तो समस्या हुने गरेको पाइन्छ । तसर्थ सकेसम्म मदिरा सेवन नै नगरौं होइन भने लिमिटमा सेवन गरौं भन्नपनि चाहान्छु । र सरीरलाई बढीमात्रामा मोटो हुन नदिनकोलागि विभिन्न तरिका अपनाउन समेत जरुरी छ । र हेपाटाइटिस बी र सी का कारणलेपनि यो रोग लाग्ने हुँदा यसबाटपनि बच्न जरुरी छ । तथा विभिन्न बंसाणुगत कुराहरुलेपनि यो रोग लाग्न सक्छ ।
तसर्थ अन्त्यमा म के भन्न चाहान्छु भने सरकारी स्तरबाटै विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरेर कलेजो बिग्रनबाट बच्ने उपायकोबारेमा सम्पूर्णलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । र खानपानमा विशेष ध्यान दिने, वेलावेलामा चेकजाँच गर्ने, एक्ससाइजहरु नियमित रुपमा गरिरहने लगायतका कुराहरुमा ध्यान दिन सकेमा यो रोग लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
प्रस्तुतिः माधब न्यौपानेले ।